“O Nweghị Ihe Ga-eme Ka M Kwụsị Ịbụ Onyeàmà Jehova” | Akwụkwọ Mgbaafọ nke 2015
A MỤRỤ YA N’AFỌ 1935
E MERE YA BAPTIZIM N’AFỌ 1956
ONYE Ọ BỤ Ọ bụ nwata nwaanyị na-ekpesi Chọọchị Katọlik ike. Mgbe ọ mụtara eziokwu Baịbụl na-akụzi, ndị ezinụlọ ya, ndị chọọchị ya, na ndị ọchịchị mesiri ya ike.
EJIGHI M ihe gbasara Chineke na ihe ndị a na-eme na chọọchị anyị egwu egwu. M so ná ndị na-ekwe ukwe na chọọchị anyị. M na-esokwa ụkọchukwu anyị aga ebe ndị ọ na-aga edo mas. N’afọ 1955, nwanne m nwaanyị gwara m okwu banyere paradaịs. O nyere m Baịbụl, nyekwa m broshọ anyị a na-akpọ “Ozi Ọma Nka Nke Ala-Eze” na akwụkwọ “Kwe Ka Chineke Bụrụ Onye-Ezi-Okwu.” Obi tọrọ m ụtọ mgbe o nyere m akwụkwọ ndị a. N’ihi ya, m jụrụ ụkọchukwu anyị ma m nwere ike ịgụ Baịbụl. Ọ gwara m na ara ga-agba m ma m g̣ụọ Baịbụl. Ma, emechara m gụọ ya.
Emechara m kwaga na nke nne na nna m ochie n’obodo a na-akpọ Boka Chika. Otu ụkọchukwu hụrụ m jụọ m ihe mere m ji kwụsị ịga chọọchị. M gwara ya na achọpụtala m na ọtụtụ ihe ndị chọọchị anyị na-akụzi esighị na Baịbụl. Ihe a m gwara ya were ya ezigbo iwe, ya abaara m mba. Ọ sịrị m, “Nwa m, gee m ntị, ị bụ atụrụ si n‘ìgwè atụrụ m kpafuo.”
M gwara ya, sị: “Abụghị m atụrụ gị kpafuru akpafu, kama, ị bụ atụrụ Jehova si na ìgwè atụrụ ya kpafuo. Ọ bụ Jehova nwe atụrụ niile, ọ bụghị nke mmadụ.”
Enweghị mgbe m gara chọọchị ọzọ. Emechara m kwaga na nke nwanne m nwaanyị. E mere m baptizim mgbe ọnwa isii gachara a kụziiri m eziokwu. Ozugbo e mechara m baptizim, m ghọrọ onye ọsụ ụzọ oge niile. Mgbe otu afọ gachara, mụ na Enrique Glass lụrụ. Enrique bụ onye nlekọta sekit n’oge ahụ. Otu ụbọchị mụ na Enrique nọ na-ezi ozi ọma n’ogige dị n’obodo a na-akpọ La Romana, ndị uwe ojii nwụchiri ya. Mgbe ha kpọ ya na-aga, m chụụrụ ha gawa. Mgbe m chụkwutere ha, m gwara ha, sị: “Abụkwa m Onyeàmà Jehova. Mụ na ya sokwa na-ekwusa ozi ọma. Gịnị mere unu achọghị ịnwụchi m otú a unu nwụchiri ya?” Ma, ha achọghị ịnwụchi m.
A tụrụ Enrique mkpọrọ ọtụtụ ugboro. Ọ nọkwara afọ asaa n’ọkara na mkpọrọ ndị a. Ma na nke ugbu a a nwụchiri ya, a tụrụ ya mkpọrọ otu afọ na ọnwa asatọ. M na-aga eleta ya n’ụbọchị Sọnde ọ bụla. Otu ụbọchị m gara ileta ya, otu onyeisi ndị na-elekọta ndị mkpọrọ jụrụ m, sị: “Gịnị kpọtara gị ebe a?”
M gwara ya, sị: “A tụrụ di m mkpọrọ n’ihi na ọ bụ Onyeàmà Jehova.”
Ọ gwara m, sị: “Ị ka bụ nwata, e nwekwara ezigbo ihe ị ga-eji ndụ gị mee, gịnị mere i ji na-egbu oge gị, na-eso Ndịàmà Jehova?”
M gwara ya, sị: “Mụnwa bụkwa Onyeàmà Jehova. I gbugodị m ugboro asaa, kpọlitechaa m n’ọnwụ, o nweghị ihe ga-eme ka m kwụsị ịbụ Onyeàmà Jehova.” Mgbe m gwachara ya ihe a, ya asị m si ebe ahụ pụọ.
Mgbe e wepụrụ iwu ahụ a machiri anyị, mụ na di m Enrique rụrụ ọrụ sekit na ọrụ distrikti ọtụtụ afọ. Di m nwụrụ n’abalị asatọ n’ọnwa Mach, afọ 2008. N’agbanyeghị ọnwụ di m, m ka bụkwa onye ọsụ ụzọ oge niile.
mailto:?body=“O Nweghị Ihe Ga-eme Ka M Kwụsị Ịbụ Onyeàmà Jehova”%0a%0ahttps%3A%2F%2Fwww.jw.org%2Ffinder%3Fdocid%3D302015008%26wtlocale%3DIB%26srcid=share⊂ject=“O Nweghị Ihe Ga-eme Ka M Kwụsị Ịbụ Onyeàmà Jehova”